Ilaahay Axdiguu Ibraahim la Dhigtay | Farriinta Kitaabka
KU AKHRI Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Sign Language Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Danish Digor Douala Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Faroese Finnish Finnish Sign Language French Fulfulde (Cameroon) Georgian German Greek Greek Sign Language Greenlandic Guarani Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Sorani Kwanyama Laotian Latvian Low German Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Maltese Mam Manipuri Mapudungun Marathi Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Miskito Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndonga Nepali Ngabere Nias Nicaraguan Sign Language Norwegian Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Romany (Southern Greece) Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Sinhala Slovak Slovenian Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ibraahim Ilaahay iimaan buu ku dhegeystay Yehowahna wuxuu u ballanqaaday inuu barakeyn doono oo uu farcankiisa tarmi doono
DAADKII waqtigii Nuux waxaa ka soo wareegay 350 sanadood. Ibraahimna wuxuu degganaa Uur magaalo nimcaysan oo ku taalla waddanka maanta loo yaqaanno Ciraaq. Ibraahim wuxuu ahaa nin iimaan weyn leh. Haddaba wax iimaankiisa tijaabin doono baa ku dhacay.
Yehowah wuxuu Ibraahim u sheegay inuu ka tago waddanka dhalashadiisa oo uu u guuro dal kale. Dalkaas wuxuu ahaa Kancaan. Ibraahim isla markiiba Ilaahay wuu dhegeystay. Wuxuu kaxaystay naagtiisa Saarah iyo Luud wiilkii walaalkiis iyo kuwa gurigiisa ka tirsan oo dhan. Waqti dheer bay Kancaan u safreen oo markay gaareen teendhooyin bay degeen. Yehowah axdi buu Ibraahim la dhigtay oo wuxuu u ballanqaaday inuu quruun weyn ka dhigi doono oo ay qabiillada dunida oo dhan aawadiis u barkoobi doonaan. Wuxuuna u sii sheegay inay dhashiisa la wareegi doonaan Kancaan.
Ibraahim iyo Luud way barakoobeen oo xoolo badan bay yeesheen. Ibraahim si deeqsinimo ah buu ugu oggolaaday Luud inuu doorto meesha uu degi lahaa. Luud wuxuu doortay dhinaca waraabsan ee Webi Urdun oo magaalada Sodom u dhowayd. Laakiinse dadka Sodom degganaa waxay ahaayeen dad xun oo sinaysta Yehowahna aad iyo aad bay ugu dembaabeen.
Waqti kaddib Yehowah Ilaah mar kale buu Ibraahim u sheegay inay dhashiisa sida xiddigaha samada u badnaan doonaan. Ibraahim ballantaas wuu rumaystay. Haddaba Ibraahim naagtiisii Saarah weli waxay ahayd madhalays. Markuu Ibraahim 99 sano jiray oo Saarahna ku dhowayd 90 Ilaahay wuxuu Ibraahim ku yiri in Saarah wiil u dhali doonto. Eraygii Ilaahay wuu rumoobay oo Saarah Isxaaq bay dhashay. Ibraahim carruur kale buu lahaa haddaba Badbaadiyaha Ceeden lagu ballanqaaday Isxaaq buu ka soo farcami doona.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Bilowgii 11:10–19:38.
Muxuu Ibraahim Kancaan ugu guuray?
Axdigee buu Yehowah Ibraahim la dhigtay?
Muxuu Yehowah Sodom iyo Gomora u baabbiʼiyay?
Waqtigii Kitaabka axdi wuxuu ahaa heshiis ama ballan rasmi ah. Yehowah si tartiib ah buu dhowr axdiyo ku caddeeyay siday u dhici doonto ulajeeddadiisa ku saabsan Badbaadiyaha Ceeden uu ku ballanqaaday. Yehowah axdiguu Ibraahim la galay wuxuu inoo tilmaamay inuu Kan la ballanqaaday Ibraahim farcankiisa ka iman doono. Kaddib axdiyo kale baa si cad inoogu sii muujiyay Midku kaasi ahaan doono.
Wadaag Wadaag Ilaahay Axdi Ayuu Ibraahim la Dhigtay